Madaxweyne Xasan oo xalay kulan is wareysi ah la yeeshay danjire Cumar Cabdirashiid – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo xalay kulan is wareysi ah la yeeshay danjire Cumar Cabdirashiid
A warsame 17 December 2014 17 December 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ku qaabilay Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay danjire Cumar C/rashiid Cali Sharmke, kaasoo shalay soo gaaray Muqdisho.
Cumar C/rashiid oo haatan ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka ayaa sanadkii 2009 noqday R/wasaarihii xukuumaddii KMG aheyd ee Soomaaliya, xilligii madaxweyne Shariid Sheekh Axmed.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kulankii xalay ku wareysanayen danire Cumar C/rashiid Cali Sharmarke oo qeybta hore uga jira liiska musharraxiinta doonaya xilka RW.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka xalay ay qeyb ka ahaayeen saaxibada Madaxweynaha, iyadoo inta badan waxyaabaha laga wada hadlayay ay ahaayeen soo xulista Golaha Wasiirada.
Madaxweynaha ayaa si gaar ah diirada u saarayay dhismaha Golaha Wasiirada iyo sida ay la tahay in loo soo xulo, iyadoo ay jireen shaqsiyaad uu wato Madaxweynaha oo ah dadka isaga aadka ugu dhow inay ka dhex muuqdaan Golaha Wasiirada.
Mar kasta oo madaxweyne soo magacaabayo RW waxaa la hordhigaa ka hor magacaabistiisa shuruud gaar ah, dhaqankaas oo culeys ku ah howl wanaaga.
Somalia:Kenyan manager takes over Somali champions
Somaliland oo qabatay in ka badan 50 doon oo ku kaluumeysanayey sharci darro